I-Rustic Hopatcong Cottage - I-Airbnb
I-Rustic Hopatcong Cottage
Andover, New Jersey, i-United States
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Michael
Jabulela ikotishi lethu elisemaphandleni eLake Hopatcong, ichibi elikhulu kunawo wonke eNew Jersey. Ikotishi lalungiswa ukuze libe "yindawo yokubalekela" eNew York City. Ukhuni olufakwe "Igumbi Elihle" likhuthaza ukuhlangana nokuxhumana, nezindawo ezithokomele zobumfihlo. Siyalijabulela leli khaya futhi sithemba ukuthi nawe uzolijabulela. Ichibi liyafinyeleleka e-Byram Bay Beach Club eseduze. Kudingeka amaphasi wesivakashi. $5/ngephasi. Ilungele amaphathi omshado, imindeni eholidini/ukushushuluza ndawonye kanye namaqembu omsebenzi. I-Mountain Creek Resort (22 miles)
"Igumbi Elihle" elifakwe ngokhuni lizwakala "njengendawo yokulala eqhweni." Hlanganisa kalula iqembu elikhulu lamamuvi omndeni eduze kwesitofu sokhuni, noma ujabulele incwadi esihlalweni esinethezekile sakho. Ikamelo ngalinye linefasitela leyunithi ye-A/C kanye nabalandeli ababili bakasilingi egumbini lokuhlala.
Ngenkathi uhlezi kuvulandi ongaphambili, ungase ukuthole kunzima ukukholelwa ukuthi ungaphansi kwamamayela angu-50 ukusuka e-Times Square eNew York City. Indawo ithule, oklebe bandiza phezu kwekhanda, ama-chipmunk agijima otshanini. Kuzwakala sengathi usemagqumeni futhi kancane sengathi usezweni. Ngaleso sikhathi, uya ezitolo, yokudlela, i-I-80 Highway nokuzijabulisa.
Ngihlala ngifona noma ngithumela umqhafazo kude. Ngivame ukuhlola indawo ekuseni.
Hlola ezinye izinketho ezise- Andover namaphethelo